musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Bahamas ikozvino yave Nyika yakachengeteka yeVashanyi veAmerica
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Press zvinoburitswa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Wtn
Mufananidzo nerubatsiro rweBahamas Ministry of Tourism & Aviation
Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation yakapa Chirevo chepamutemo nemusi weSvondo vachipindura Iyo Yakagadziridzwa CDC Yekufamba Advisory neUnited States.
Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation yakacherekedza ziviso yakagadziridzwa yekufamba yakapihwa kubva Nzvimbo dzeUS dzekuDzivirira Zvirwere and Prevention (CDC) ichidzikisa kurudziro yekufamba kweThe Bahamas kubva paNhamba 4 kuenda paNhamba 3 kwainoenda.
Iyo CDC inoongorora njodzi yakaderera nekuda kwekudzikira kweCCIDID-19 kuverenga uye yakaderera kesi trajectory. Kuvharirwa kwejekiseni uye kushanda kunoitawo basa mukutsunga kweCDC yemazinga ekuraira.
Ministry of Tourism, Investments & Aviation inopa zano rekuti, isu, veruzhinji, hatingaregedze kungwarira kwedu - masisitimu akaiswa ari kushanda.
Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation Statement pane Yakagadziridzwa CDC Yekufamba Advisory:
Kuchenjerera kuchave kwakakosha sezvo matanho ekuzvidzivirira acharamba aripo kuti ave nechokwadi chekuti kuchengetedzwa kunoramba kuri kwakakosha kune vagari nevashanyi.
Zvichangoburwa zvigadziriso uye zvinodiwa zvekupinda zvakaita sekuona kuti vafambi vakabaiwa zvizere uye vasina kubayiwa vanowana bvunzo yakaipa yeCCIDID-19 (ingave yeRapid Antigen Test kana PCR Test), yakatorwa isingapfuure mazuva mashanu (5) zuva rekusvika muThe Bahamas risati rasvika. - zvakasanganiswa nezvirambidzo zvepachitsuwa sezvinodiwa - zvakaratidza kubudirira mukubatsira kudzikisira kupararira kwehutachiona.
"Kushanya ndihwo musimboti wehupfumi hwedu, uye takatarisana nekuona kuti maprotocol aripo achengetedza vashanyi vedu nevagari vakachengeteka," akadaro Mutevedzeri weMutungamiriri weHurumende Honourable I. Chester Cooper, Gurukota rezvekushanya kweBahamas, Investments & Aviation. “Yambiro yakadzikiswa iyi humbowo hwekuti zvatiri kuita zviri kushanda – asi hazvireve kuti tinogona kuregera panguva iyi yakaoma. Handina kupokana kana tese tikaramba tichishanda pamwe chete, tichaona kukura kwakanyanya muzvikamu zvedu zvekushanya. "
Nekuda kwekuyerera kweCCIDID-19, Hurumende yeThe Bahamas icharamba ichitarisa zvitsuwa zvega uye kuita matanho ekudzivirira kugadzirisa nyaya dzakanangana kana spikes zvinoenderana. Kuti uone nezve The Bahamas 'yekufamba uye yekupinda maprotocol, ndapota shanya Bahamas.com/travelupdates.
Isu tinoenderera mberi nekukurudzira munhu wese kuti aite chikamu chavo kuderedza kupararira: pfeka masiki, geza maoko ako, ubaiwa nhomba uye utevedzere mapuroteni ehutsanana anobatsira kuchengetedza iwe nevamwe vako vekuBahamian.
Mamwe ruzivo pamusoro pezviri kuitika muBahamas munaNovember.